Global Aawaj | » मौसमी रुघा-खोकी र कोभिड संक्रमण छुट्याउने उपाय मौसमी रुघा-खोकी र कोभिड संक्रमण छुट्याउने उपाय – Global Aawaj
मौसमी रुघा-खोकी र कोभिड संक्रमण छुट्याउने उपाय
बुटवल । कोरोना संक्रमणको अवस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको छ । यो बेला मौसम परिवर्तन तथा नजिकिँदै गरेको चाडवाडमा गरीने व्यवहार लगायतका जीवन शैलीले स्वास्थ्य सुरक्षाका चुनौतीहरु थपिन सक्छन् । कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेका बेला मौसम परिवर्तनसँगै सामान्य रुघा खोकीले देखिने लक्षणहरुमा पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा हामी आतंकित बनिरहेका हुन सक्छौं ।
रुघाखोकी र कोभिडको लक्षण प्राय मिल्दो जुल्दो भएकाले मानिसहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर हुँदा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता गुमाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउने गरेका छन् । नजिकिएको चाडवाड, मौसम परिवर्तन तथा कोभिड-१९ समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएको अवस्थामा कस्तो जीवन शैल अपनाउने भन्ने बारेमा ग्लोबल आवाजका लागि बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डा. सुदर्शन थापासँग डि.बी. सुस्लिङले गरेको कुराकानी :
सामान्य रुघा, खोकी र कोरोना संक्रमण कसरी छुट्याउने ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रुघा, खोकी र सामान्य ज्वरो आउदैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सोच्नु हुँदैन । अहिले स्वभाविक रुपमा रुघा, खोकी र सामान्य ज्वरो आउने मौसम नै हो । ज्वरो र खोकी कसरी आइरहेको छ भन्ने ख्याल गर्न सके कोरोनाले हो वा मौसमी फ्लुले भन्ने सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । मौसमी फ्लुमा लाग्ने र कोरोनामा लाग्ने खोकीमा निकै भिन्नता रहेको छ ।
यदि खोक्दा थोरै भए पनि खकार आइरहन्छ र नाकबाट पातलो पानी वा सिँगान बगिरहन्छ भने त्यो मौसमी फ्लुका लक्षण हुन् । त्यसैले यस्तो बेला धेरै आत्तिनुपर्दैन । त्यतिबेला मानिसलाई रूघाखोकी पनि भएको हुनसक्छ । यसलाई चिकित्साकीय भाषमा ‘कमन कोल्ड’ भनिन्छ । रुघा लाग्दा नाकबाट पातलो पानी बग्ने र पछि त्यही पातलो पानी बाक्लो सिँगान हुँदै जान्छ । मौसमी रुघाखोकीका कारण नाक टालिने र सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । हुन त कोरोनामा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ तर रूघामा जसरी नाक टालिदैन ।
तर जति खोक्दा पनि थोरै पनि खकार आउँदैन भने त्यो कोरोनाका कारण आएको खोकी हो भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । कोरोनाको खोकी एकदम सुख्खा हुन्छ । जति खोक्दा पनि कफ आउँदैन । तर अरू मौसमी रुघाखोकीमा मज्जाले खकार आउँछ ।
सामान्यतया सर्वसाधारणले परीक्षण नगरेर पनि कोरोना पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था हो त ?
घरमै बसेर रोग पत्ता लाग्ने भन्ने होइन, सामान्यतया हामीले जानकारी राख्न सकिने कुरा मात्रै हो । कोरोना संक्रमण हो, होइन भन्ने कुरा थाहा पाउन पिसिआर परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यद्यपी माथी उल्लेखीत लक्षणहरु मात्र हेरेर कोरोना छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन । टाउको, जिउ दुख्ने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण आएको ज्वरो दुई चार दिन रहन्छ । मौसमी फ्लु हो भने अझै लामो समयसम्म आइरहन सक्छ । कोरोनाको ज्वरो अलि कडा हुन्छ । त्यस्तो बेला मानिसले बढी जाडो महशुस गर्छन् । अर्थात कोरोना लागेको व्यक्तिलाई कामज्वरो आउने हुन्छ ।
तर मौसमी फ्लुको ज्वरो त्यस्तो कडा हुँदैन । फ्लुका कारणले लामो समयसम्म ज्वरो आए पनि काम ज्वरो भने आउँदैन । अर्थात शरीर काम्दैन । कोरोनाको लक्षण १४ दिनसम्ममा पनि देखिन सक्छ । तर फ्लुको लक्षण तीन दिनमा देखा पर्न थाल्छ । त्यसैले कहिलेदेखि लक्षण देखा पर्न थाल्यो भने स्वयंले विचार गर्नुपर्छ । यसरी कामज्वरो आयो र दुई–चार दिनसम्म मात्र रह्यो भने त्यो कोरोना हुन सक्छ । यस्तो बेला तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ ।
कोरोनाभन्दा फ्लुमा बढी जिउ दुख्ने, थकान महशुस हुने र खाना खान मन नलाग्ने गर्छ । साथै लक्षण पनि फ्लुमा छिटो देखिन्छ । कोरोनामा भने विस्तारै देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने पनि कोरोनाका लक्षण हो । यसले पनि संक्रमण खुट्याउन थप सहज हुन्छ ।
मौसम परिवर्तनले मानिसहरुमा सामान्य रुघा खोकीका लक्षणहरु देखिन थालेका छन्, चाडवाड पनि नजिकिँदै छ, दैनिक जीवन र खानपानलाई कसरी ख्याल गर्न सकिन्छ ?
मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रौ दैनिक क्रियाकलापहरुलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खानपान तथा दैनिक काम काज गर्दा सबैले स्वास्थ्यको ख्याल राख्न जरुरी छ । शारीरिक सरसफाई तथा वातावरणीय सरसफाई अत्यावश्यक चीज हुन् । नेपालीहरुको चाड दशै, तीहाजर, छठ लगायतका पर्वहरु दैलो अगाडी आइसकेको भए पनि विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्षको माहोल छैन । सकेसम्म कोही पनि घर बाहिर ननिस्कौं, यदि निस्कनै पर्ने भए अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौं ।
विशेष गरी यो वर्षको दशैं आफ्नो घर परिवार भित्रै ठूलो जमघट नगरी मनाउन सल्लाह दिन चाहान्छौं । नेपाल सरकारले भने अनुसार नै हामी जो जहाँ छौं सोही ठाउँमा बसेर पर्व मनाऔं । सबै भन्दा ठूलो हाम्रो जीवन हो, जीवन रह्यो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौं । त्यसैले यो वर्षको दशै अहिलेकै ठाउँमा बसेर मनायौं भने तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऔं भने आगमी दिनहरु हाम्रै हुन् ।